Colony Ship: Post-Earth Colonization Inouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Colony Chikepe mutambo wekutendeuka-based vhidhiyo nerutsigiro rweWindows, MacOS uye Linux. Yakave yakagadzirwa neIron Tower Studio, uye yave kuwanikwa kuburikidza neSteam Early Access, pamwe neGOG. Naizvozvo, iwe unogona kuona kana iwo makumi mapfumbamwe kubva muzana eongororo dzakanaka aine chekutanga ruoko. Asi chokwadi ndechekuti rinotaridzika serakanaka, uye rinovimbisa maawa akanaka evaraidzo.
Colony Chikepe chakavakirwa pane nyaya na colonization yemamwe mapuraneti munguva yepashure-Pasi. Uye zvakare, inoshandisa ine simba kwazvo uye inozivikanwa graphic injini, sezvo iri yakavakirwa pane Unreal 4. Kana iri mhando yemutambo wevhidhiyo, sezvandambotaura, ndeye kutendeuka kwemapoka akabatanidzwa, uye mutambo-wekutamba maitiro . Zvese zvinoitika muchikepe chechitundumusere chakatungamirwa kuProxima Centauri, mugore ra2754, panguva iyo Nyika haisisiri zvayaive, uye kune vazhinji vavharirwa muchikepe ichi vasingazvizive.
Iyo Colony Ship vhidhiyo mutambo inoratidza zvakare a yakadzama hunhu system zvinoenderana nehunyanzvi uye nzira dzekubata mamishini, nehurongwa hwekutaurirana hwakangwarira. Sarudzo dzako ndidzo dzicharatidza kuti ndivanaani vachava shamwari dzako nevavengi vako. Uye zvakare, iwe uchaona kuti uyu isometric wekutamba-mutambo mutambo unofemerwa neimwe inozivikanwa zita, senge Nherera Dzedenga. Rimwe zita rine zvimwe zvakafanana maererano nenhoroondo.
Zvimwe features yeColony Ship ndeiyi:
Unyanzvi-hwakavakirwa hunhu system.
Turn-based tactical kurwisa nezvombo zvakasiyana.
Akawanda mhinduro dzebazi main nyaya.
Hunhu hwakasiyana hwenhengo.
3 makuru mapato uye zvibodzwa zvemamwe madiki madiki.
Huge arsenal yezvombo zvema melee, pfuti, magirinedhi, uye zvimwe zvigadzirwa zvenguva yemberi, senge nzvimbo dzekuviga, magadzirirwo emagetsi anokanganisa, nhovo dzemagetsi, nezvimwe.
Nharaunda dzakasiyana dzekuongorora: imba yeinjini, hydroponics, maguta eDystopian, matongo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Colony Ship: Post-Earth Colonization Inouya kuLinux
Usataure kuti hazvisi muchiSpanish kuti zvakashata kune hutano kana chimwe chinhu, uyezve usaise chinoshungurudza chinongedzo chakanangana nemutambo kana chero chinhu, kuti urikudonhedza zai.
Izvo hazviratidzike sedunhu rekuyambuka-chikuva, iWindows chete zviri zviviri zvitoro
Ini ndapinda iyo peji pane Steam uye ini handione chero kupi iyo ine Linux rutsigiro. Iwe unazvo zvisina kufanira here?